Filoha Ravalomanana : Ny ambadiky ny fiezahana hanapotika azy | Ny Valosoa Vaovao
Filoha Ravalomanana : Ny ambadiky ny fiezahana hanapotika azy
par gvalosoa | Mar 13, 2018 | Edito |
Vao nitondra ny tany sy ny firenena ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia tsy mba nanisy olana mikasika izany ny filoha Marc Ravalomanana . Na nisy aza ny resabe nikasika ny fizotran’ny fifidianana nisian’ny hoe “halabato be vata” tamin’izany dia tsy nanisy resaka na dia kely akory izany ny filoha Marc Ravalomanana, fa nanaja ny maha filohampirenena an’i Hery Rajaonarimampianina . Na izany aza ny zava-misy dia nenjehin’ny fitondràna HVM faran’izay zokiny araka ny fitenin’ny tanora azy ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), Marc Ravalomanana . Tsy mitovy amin’ny mpanao politika rehetra ny fitondràna an’i Dada nandritra izay 5 taona latsaka kely nitondràn’ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay , ny tetezamita moa efa tsy lazaina intsony fa ny fitondràna izay lazaina fa voafidim-bahoaka no asiana resaka eto . Nitady fiaraha-miasa tamin’ny fitondràna HVM ny filoha Marc Ravalomanana , nanambara izy fa vonona hanampy ny mpitondra amin’ny traik’efa izay hananany , nefa tsy nanaiky moa ny mpitondra HVM , ka akory atao . Fa rehefa nodinihana sy nohalalinina dia misy antony ny fanapotehen’ny HVM sy ny forongony ny filoha Marc Ravalomanana fa ny filoha Hery Rajaonarimampianina no tsy mahatakatra izany . Iza moa no manodidina ny filoha Hery Rajaonarimampianina ankehitriny ?
Raha atao ny kajy dia eo amin’ny 10 % eo raha misy no olombaovao . Ankoatra izay ; mpanao politika tsy azo antoka fa mpamadika palitao nandritra ny fitondràna nifanesy teto amin’ny firenena no miaraka aminy. Mpanao politika tsy mahazaka olona fa mpiandry tataka , miandry fanonganam-panjakàna hahazoana seza fotsiny . Mpanao politika manana tantara ratsy eto amin’ny fitondràna no mialokaloka ao . Manaraka izany , Andry Rajoelina no nanao izay nahalany ho filohampirenena ny kandida Hery Rajaonarimapianina tamin’ny fotoan’androny . Nampiasain’i Andry Rajoelina ny vola sy ny fahefam-panjakàna teo ampelatanany mba haha filoha an’i Hery Rajaonarimampianina minisitry ny vola . Rehefa lany anefa ity farany , ny olona notsipahiny volalohany dia i Andry Rajoelina sy ny ekipany . Tsy vitan’izay fa mbola tratry ny zarazarao hanjakàna ny MAPAR , ka nizara roa ireo depiote nanohana mahafatrampo ny mpanongam-panjakàna tamin’izany . Nandeha ny fotoana, 5 taona no teo amin’ny fitondràna ny HVM , tsy nisy zava-bitan’ity farany nadritra izay fotoana lava izay fa tafiditra ao anaty fahantrana lalina ny Malagasy . Tsy misy zavatra misongadina vita fa fanenjehana olona heverina fa fahavalo politika no mibahana . Fantatr’ireo mpanao politika manakaiky ny filoha Hery Rajaonarimampianina tsara fa sarotra be no mbola hiverenan’ity farany eo amin’ny fitondràna indray . Marobe ny fampahalalam-baovao vao nisokatra HANASONGADINANA ny fitondràna HVM fa eee! tsy mahita mangirana mihintsy Hery Rajaonarimampianina . Manaraka izany , olona akaiky an’i Andry Rajoelina ny manodidina an’i Hery Rajaonarimampianina ny ankabeazany , ireo no manipy hoditr’akondro an’ity farany mba handresen’i Andry Rajoelina mpanongam-panjakàna azy .
Mandeha mantsy ny resaka fa ny filoha Marc Ravalomanana no mpifanandrina amin’i Andry Rajoelina sy Hery Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana amin’ity taona ity . Tsy azo eritreretina mihintsy izany hoe Andry sy Hery Rajaonarimampianina no hanao fihodinana faha 2 izany raha toa ka hisy izany fa tsy maintsy ny iray amin’izy ireo na olonkafa mihintsy no hifaninana amin’ny filoha Marc Ravalomanana , satria raha ny tena voka-pifidianana tamin’ny taona 2013 no jerena dia I Jean Louis Robinson notohanan’I Dada no nandresy. Tamin’ireny fotoana ireny, tany Afrika tsimo aza izy, ireny ny voka-pifidianana, mainka fa izy eto an-toerana izao. Ny dikany: tsara toerana ny filoha nasionalin’ny TIM amin’io fifidianana ho avy io, maro no mihevitra fa fihodinana voalohany na 1 er tour aza izany dia ho vitany, izay rahateo no hirarian’ny mar oleo izao fijaliana noho ny fanonganam-panjakana sy ny tarazony amin’izao fotoana izao. Ho an’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, mitandrema ianao Andriamatoa filoha fa diso fahavalo ianao io manenjika ny filoha Marc Ravalomanana io, ao an-tranonao mihintsy ireo mpanao politika mpivadika palitao, izay tsy misy tombontsoa kely ho azy akory ny hijanonanao eo na tsia eo amin’io fitondràna io . Mipitika fotsiny izy fa ianao filoha kosa ho tratra farany eo . Ao anatin’ny fitondràna ao ihany ireo tena fahavalonao mpanipy hoditr’akondro fa tsy ny filoha Marc Ravalomanana velively , tandremo fa mandady ny trambo, tsy trambo mantsy fa foza e !